ဒီလိုအခြိနျ မှာ သိနျး (၁၈၀) ပေးပွီး ဟျောတယျ အတငျးလာခိုငျးတဲ့ အကွောငျး ပွောပွ လာတဲ့ ပတျထရဈရှာ – Shwe Likes
ဒီလိုအခြိနျ မှာ သိနျး (၁၈၀) ပေးပွီး ဟျောတယျ အတငျးလာခိုငျးတဲ့ အကွောငျး ပွောပွ လာတဲ့ ပတျထရဈရှာ
G Shwe | March 3, 2021 | Celebrity | No Comments
အခုလို အခွအေေ နမြိုးမှာ ပွညျသူေ တှနဲ့ အတူ ရပျတညျနတေဲ့ သူမကို နာမညျဖြ ကျဖို့ ကွိုးစားကွ သူတှရှေွိေ ကာငျး ပွောပွလာတဲ့ ပတျထရဈရှာ
ပရိသတျ ကွီးရေ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးေ ခြာလေး ပတျထရဈရှာ ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတျ ကားေ တှကတဈဆငျ့ အနုပညာ လမျးကွော ငျးထကျကို လြှောကျလှ မျးလာခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျအားပေးမှု နဲ့ အခြိနျခဏလေး အတှငျး အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိခဲ့တဲ့ သူမက ရုပျရှငျ ဇာတျ ကားတှေ အပွငျ photo shooting တှကေိုလညျး လကျခံရိုကျ ကူးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ အခုလို မတညျငွိမျသေးတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာတော့ ပဈထရဈရှာက အနုပညာလှု ပျရှားမှုတှကေို ခတ်ေတ ရပျနားထားပွီး ပွညျသူတှေ နဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
လမျးပျေါထှကျကာ ပွညျသူေ တှနဲ့အတူ ရပျတညျနတေဲ့ သူမကို လူတ ဈစုက နာမညျ ဖကျြဖို့ကွိုး စားနတောဖွဈပွီး မကွာသေးတဲ့ နာရီပိုငျးအခြိ နျလောကျက လူမှု ကှနျယကျ ဖဘှေ့တျအကောငျ့မှာ စာသားလေး အခြို့ရေးသားတ ငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကတော့ ပ တျထရဈရှာက ” နလေ့ညျ ၃:၀၀ နာရီ က ကြှနျမ post တဈခု တငျဖို့အတှကျ အလုပျရှု ပျနတေုနျးမှာ ရငျးနီးတဲ့ အသိတဈေ ယာကျက တဈဆငျ့ ဖုနျးဆကျလာတယျ …. နာမညျကွီး ဗိုလျခြုပျကွီး ရဲ့ သားတဈေ ယာကျက ကြှနျမကို ကွိုကျလို့ သိနျး ၁၈၀ ပေးမယျဆိုပွီး မိတျဆ ကျခိုငျးတယျတဲ့ ရှငျ Hotel နာမညျပါ ထညျ့ပွော လိုကျသေးသတဲ့ အကွံပကျစကျခကျြနျော ဘယျလောကျ ယုတျမာခငျြနလေဲဆိုတာ တှေးသွာ ကညျ့တော့.ကြှနျမတို့ကို စောကျမွငျက ပျနတေယျ ဆိုတာ ကောငျးကောငျးကွီး နားလညျသိရှိပွီးသားပါ ….
ဘာအကွံအစညျ ရှိတယျ ဘာလိုခငျြတယျ ဆိုတာ ကိုလညျး သိပါတယျနျော ဟုတျကဲ့ ကမြတို့က ရှငျတို့ လိုတော့ မခမျြးသာပါဘူး။ ကြှနျမတို့တှေ ဒီကာလမှာ အလုပျ မရှိတော့ ဝငျငှလေုံးဝမရှိ ထှကျငှေ သာရှိပါတယျ ဒါပမေယျ့လေ ခွှခွှေတောတာလေးနဲ့ နနေတေယျ ရှိတာပဲ ဝတျမယျ ရှိတာနဲ့ စားမယျ မပွောရဲမဆိုရဲ အပေါကျပိတျေ နမယျ့ သွူ ဖဈအောငျတော့ ဇာတျလာ မသိမျးသှငျးနဲ့ sorry ပဲ ” ဆိုပွီး ရေးသားတငျပေးလာပဲ ဖွဈပါတယျ။ တမငျကွံစညျပွီး နာမညျဖကျြဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ သူတှရှေိကွောငျးပရိသတျတှေ သိရှိစဖေို့အတှကျ ပတျထရဈရှာရဲ့ စာသားေ လးတှနေဲ့ ပုံအခြို့ကို ပွနျလညျေ ဝမြှပေးလိုကျ ပါတယျနျော။
အခုလို အခြေအေ နမျိုးမှာ ပြည်သူေ တွနဲ့ အတူ ရပ်တည်နေတဲ့ သူမကို နာမည်ဖျ က်ဖို့ ကြိုးစားကြ သူတွေရှြိေ ကာင်း ပြောပြလာတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
ပရိသတ် ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးေ ချာလေး ပတ်ထရစ်ရှာ ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ် ကားေ တွကတစ်ဆင့် အနုပညာ လမ်းကြော င်းထက်ကို လျှောက်လှ မ်းလာခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်အားပေးမှု နဲ့ အချိန်ခဏလေး အတွင်း အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့တဲ့ သူမက ရုပ်ရှင် ဇာတ် ကားတွေ အပြင် photo shooting တွေကိုလည်း လက်ခံရိုက် ကူးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုလို မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတော့ ပစ်ထရစ်ရှာက အနုပညာလှု ပ်ရှားမှုတွေကို ခေတ္တ ရပ်နားထားပြီး ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ပြည်သူေ တွနဲ့အတူ ရပ်တည်နေတဲ့ သူမကို လူတ စ်စုက နာမည် ဖျက်ဖို့ကြိုး စားနေတာဖြစ်ပြီး မကြာသေးတဲ့ နာရီပိုင်းအချိ န်လောက်က လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှာ စာသားလေး အချို့ရေးသားတ င်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပ တ်ထရစ်ရှာက ” နေ့လည် ၃:၀၀ နာရီ က ကျွန်မ post တစ်ခု တင်ဖို့အတွက် အလုပ်ရှု ပ်နေတုန်းမှာ ရင်းနီးတဲ့ အသိတစ်ေ ယာက်က တစ်ဆင့် ဖုန်းဆက်လာတယ် …. နာမည်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲ့ သားတစ်ေ ယာက်က ကျွန်မကို ကြိုက်လို့ သိန်း ၁၈၀ ပေးမယ်ဆိုပြီး မိတ်ဆ က်ခိုင်းတယ်တဲ့ ရှင် Hotel နာမည်ပါ ထည့်ပြော လိုက်သေးသတဲ့ အကြံပက်စက်ချက်နော် ဘယ်လောက် ယုတ်မာချင်နေလဲဆိုတာ တွေးသြာ ကည့်တော့.ကျွန်မတို့ကို စောက်မြင်က ပ်နေတယ် ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်သိရှိပြီးသားပါ ….
ဘာအကြံအစည် ရှိတယ် ဘာလိုချင်တယ် ဆိုတာ ကိုလည်း သိပါတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ကျမတို့က ရှင်တို့ လိုတော့ မချမ်းသာပါဘူး။ ကျွန်မတို့တွေ ဒီကာလမှာ အလုပ် မရှိတော့ ဝင်ငွေလုံးဝမရှိ ထွက်ငွေ သာရှိပါတယ် ဒါပေမယ့်လေ ခြွေခြွေတာတာလေးနဲ့ နေနေတယ် ရှိတာပဲ ဝတ်မယ် ရှိတာနဲ့ စားမယ် မပြောရဲမဆိုရဲ အပေါက်ပိတ်ေ နမယ့် သြူ ဖစ်အောင်တော့ ဇာတ်လာ မသိမ်းသွင်းနဲ့ sorry ပဲ ” ဆိုပြီး ရေးသားတင်ပေးလာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တမင်ကြံစည်ပြီး နာမည်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေရှိကြောင်းပရိသတ်တွေ သိရှိစေဖို့အတွက် ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ စာသားေ လးတွေနဲ့ ပုံအချို့ကို ပြန်လည်ေ ဝမျှပေးလိုက် ပါတယ်နော်။
ပိုကျဆံ ၃ သိနျး နဲ့ ဖုနျး တောငျးတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှကေို ဖွရှေငျးလာတဲ့ ရမှေနျရဲ့ ကောငျမလေး ကေ